काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । 'नीति तथा कार्यक्रम' को शैलीको सम्बोधनमा उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे पनि आफ्ना धारणा राखेका छन् । उनले लोकतन्त्र र अराजकतन्त्रका बीचमा रहेको सीमारेखा उल्लङ्घन भए लोकतन्त्र स्वयं जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरूका लागि आफूले घोषणा गरेका नीतिका आधारमा अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य जारी गर्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । यसअघि संघीय संसदका दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरी जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर यसपालि भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले नै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारका आगामी आर्थिक वर्षका नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पढ्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ-
२३. ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन । जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्‍कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताले विश्‍वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्‍त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो । निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्‍नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो । नीतिहीन गठबन्धनको भर्‍याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो । जनताप्रति अविश्‍वास गर्नु हो । निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु । परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्‍न गरिनेछ । मनमा कुनै आशङ्‍का छन् भने फेरि भन्‍न चाहन्छु - आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्‍नुहोस् ।
४७. हाम्रा सबै काम र योजनाहरू “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्‍ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछन् । परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता हुनेछ । समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि - हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौं । यसको लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व हो । राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनेछन् । यी निर्वाचनमार्फत् हामी हाम्रो सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछौं । जनतामा अहिले देखापरेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौं ।
४८. समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता - कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने हुनेछ । पूर्वाधार - फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ । यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ । कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिनेछ । यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ । डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्‍चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १७:२४